स्ट्रबेरी केला स्मूदी - स्वादिष्ट र सरल! | ThermoRecines
स्ट्रबेरी मौसम जारी छ! म तिनीहरूलाई माया गर्छु, यो मेरो एक हो मनपर्ने फलहरू। दुःखको कुरा यो छ कि मौसम यति थोरै रहन्छ। धेरै चोटि म १ वा २ किलो किन्छु र मँ चिनीको साथ साघुँरोदेखि धनी हिलाउँदछ र आइस क्रिमसम्म धेरै प्रकारले उनीहरूलाई तयार पार्न सक्छु।
आज म तिमीलाई मेरो एउटा देखाउन चाहान्छु मनपर्दो हल्लाउँछ म प्राय: हप्तामा तयार हुन्छु, मध्य बिहान, जब म खेल खेल्न जिमबाट घर फर्कन्छु। यो भिटामिनको अद्वितीय आपूर्ति हो। अवश्य पनि, म सिफारिस गर्दछु कि तपाईले यसलाई तयार गर्दा नै लिनुहोस् किनकि यदि समय बित्दछ भने यसले अक्सिडाइज गर्न र अत्यधिक गाढा गर्न थाल्छ।
यो नुस्खा तपाईं को लागी उत्तम छ जो Thermomix को साथ शुरू गर्दै हुनुहुन्छ, जो तपाईं को लागी आहारतपाईं मध्ये धेरै जो फल अधिक मनपर्दैन (र त्यसैले तपाईं एक राम्रो हिस्सा हुनेछ), बच्चाहरु र ल्याक्टोज असहिष्णु को लागी को लागी, मलाई थाहा छ कि यो Kaiku ब्रान्ड उत्पादनहरु संग उत्तम छ।
1 स्ट्रबेरी केला स्मूथी
3 स्ट्रबेरी र केले स्मूदीको गुणहरू
4 यो वजन कम गर्न उपयोगी छ?
फलको बारेमा सबै राम्रा चीजहरू तपाईंलाई प्रदान गर्ने एक स्वादिष्ट स्मूदी।
तयारी समय: 4M
१ पाकेको केरा
पाकेको स्ट्रबेरीको २ 250० ग्राम (चिसो)
300 ग्राम दूध वा सादा तरल दही (चिसो)
केहि बूढी कागती जुस (वैकल्पिक)
हामीले काटिएको केरा र स्ट्रबेरीलाई डाँठबिना राख्यौं र शीशामा काट्यौं।
त्यसपछि हामी चिनी थप्दछौं र दुध थप्दछौं। हामी कागतीको केही थोपा थप्दछौं।
हामी प्रोग्राम १ मिनेट, प्रगतिशील गति 1-5-१०।
यहाँ तपाईं यसलाई आफ्नो मनपर्ने (थप दूध, चिनी) मा राख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, लि drops्गोको केही थोपा।
यदि तपाईं कूलर चाहनुहुन्छ भने, म पनि यो सिफारिस गर्दछु थर्मोमिक्सको साथ स्ट्रबेरी आइसक्रीम जुन तपाईं minutes मिनेटमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै साधारण तरिकामा। तपाई कुन रोज्नुहुन्छ?
स्ट्रबेरी र केले स्मूदीको गुणहरू
फल सँधै भित्रै हुनुपर्दछ सन्तुलित र स्वस्थ आहार। त्यसोभए, यस अवस्थामा हामी दुई मुख्य व्यक्तिहरूसँग बाँकी छौं। एकातिर हामीसँग स्ट्रबेरीहरू छन् जुन महान पात्रहरू हुन्। फोलिक एसिड हुनुको साथै उनीहरूसँग बीटा र बी ११ जस्ता असंख्य भिटामिनहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरू क्याल्शियम र एन्टिआक्सिडेन्टमा धनी छन्। थप रूपमा, ती आँखाहरू र हाम्रो हड्डी स्वास्थ्यको लागि उत्तम छन्। बिर्सनु हुँदैन कि तिनीहरू एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी हो र खराब कोलेस्ट्रोलको बिरूद्ध लड्नेछ।
अर्कोतर्फ, केरा भिटामिनहरूमा पनि पछाडि हुँदैन। तिनीहरूसँग ए, सी, बी १, बी २ र बी have छ। पनि छ पोटेशियम, फलाम, वा जिंक जस्ता खनिजहरू, अरु मध्ये। यो नोट गर्नु पर्दछ कि यसमा कार्बोहाइड्रेट पनि छ। त्यसैले हामी हाम्रो शरीरको ख्याल गर्न र कम क्यालोरिक सेवनको साथ दुई उत्तम फलहरू संयोजन गर्दैछौं। स्ट्रबेरी र केरा स्मूदी एउटा खाजा वा खाजाको रूपमा लिन र यसका बारे कुनै पश्चाताप बिना नै उत्तम हुनेछ। यो एक व्युत्पन्न पेय हो र एकै समयमा यसले तपाईंको शरीरबाट विषहरू हटाउनेछ। हामी अरू के सोध्न सक्छौं?
यो वजन कम गर्न उपयोगी छ?
हामीले सबैभन्दा धेरै पेय पदार्थहरू मध्ये एकको सामना गरिरहेछौं भनेर जानिसके पछि र ठूलो योगदानका साथ, हामीसँग समाधान गर्न अर्को प्रश्न छ। यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि यसले तपाईंको तौल घटाउन मद्दत गर्दछ भने, हामी हो भनेर जवाफ दिन्छौं। त्यो हो, यसले तपाईंलाई अधिक क्यालोरी प्रदान गर्दैन, सँधै स्वस्थ आहार भित्र। हामी त्यो भन्न सक्छौं १०० ग्राम केराले करीव 100 cal क्यालोरी प्रदान गर्दछ। जबकि स्ट्रबेरी, प्रत्येक १०० ग्राम को लागी तिनीहरूले हामीलाई cal 100 क्यालोरी छोड्नेछन्। तपाईंको स्केमा सँधै स्किम मिल्क थप गर्नुहोस् र चिनी हटाउनुहोस्। तपाईं यसलाई आधा चम्चा महको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ वा केवल स्वादको लागि थोरै दालचिनी थप्न सक्नुहुन्छ।
हामीले उल्लेख गरेकै अनुसार यो व्युत्पन्न छ। त्यसैले स्ट्रबेरी र केरा स्मूदीको गिलासको साथ हामी शरीर दिन्छौं धेरै थोरै क्यालोरीको साथ भिटामिन र खनिजहरूको धेरै मात्रा। यी सबैको लागि, खानाको बीचमा लिनु आवश्यक छ, जब तपाईंको शरीरले तपाईंलाई केही खाजाको लागि सोध्यो। अवश्य पनि, सँधै सन्तुलित आहार राख्नुहोस् र निश्चित रूपमा केही प्रकारको शारीरिक गतिविधि गर्नुहोस्। चाँडै तपाईंले आफ्नो शरीरमा परिवर्तन देख्नुहुनेछ!
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: पेय पदार्थ र जुस, Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, गर्मी रेसिपी, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, शासन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » पेय पदार्थ र जुस » स्ट्रबेरी केला स्मूथी
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं एक दही थप्न सक्नुहुन्छ हिलामा अधिक क्रीमनेस दिन !!!!
फेरनलाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो योगदान फेरेन!
नमस्ते इरेन, कस्तो राम्रो नुस्खा !! मौसमी स्ट्रॉबेरीको फाइदा उठाउँदै घरमै हामी रातीको खानाको लागि स्मूदी र फलफूलहरू लिइरहेका छौं ... त्यसैले आज राती म यो गर्नेछु !!! नुस्खा को लागी धन्यवाद =)
Nerwen लाई जवाफ दिनुहोस्
यो महान छ, तपाईंले मलाई पठाउनु भएको व्यंजनहरूको लागि धन्यवाद। म चाहान्छु कि मलाई मलाई जामको लागि नुस्खा दिन दिनुहोस्, केराको साथ स्ट्रबेरी, यदि तपाईंलाई केहि थाहा छ भने। धेरै धेरै अभिवादन धन्यबाद।
नमस्ते लिडिया, धेरै धेरै धन्यबाद। मलाई कुनै स्ट्रबेरी र केरा जामको बारे थाहा छैन, तर विचारको लागि धन्यवाद ... म यसलाई चाँडै नै बनाई दिनेछु। शुभकामना!
नमस्कार, आइरेन, यदि तपाईंले केहि पनि प्रयास गर्नुभयो र यो राम्रो भयो भने, तपाईं यसलाई ममा पठाउन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। धेरै धेरै धन्यवाद। शुभकामना।
हिजो मैले सुन्तलाको साथ एक केरा जाम गरे,
र म दर्शनीय रहन्छु। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि यो प्रयास गर्नुहोस्, त्यहाँ सधैं केही पका केरा हुन्छ जुन कोही चाहँदैन, बधाई छ।
महान Lidia! के तपाइँ मलाई नुस्खा पठाउन सक्नुहुन्छ? irene.arcas@actualidadblog.com?
भोली मसँग पाहुनाहरू छन् मलाई स्मूदी मनपर्‍यो तर म ल्याक्टोज असहिष्णु छु। के तिमीलाई लाग्छ कि म यो पानीले गर्न सक्थें? यो उस्तै हुनेछैन ... तर कुनै सिफारिसहरू? धन्यवाद! शुभकामना
मोनिकलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मोनिक, यो तपाईको ल्याक्टोज पचाउन नसक्ने समस्या होईन। म ल्याक्टोज-रहित दुध तयारीका लागि पानी परिवर्तन गर्दछु जस्तै Kaiku (यो दही वा दुधको प्रकार हुन सक्छ)। भाग्यमानी!
मटिग्र .72 भन्यो
नमस्कार, मलाई चिनीको सट्टा कंडेन्स्ड मिल्क थप्न मनपर्छ र उनीहरूलाई ब्लेन्डरमा क्रुश गर्नुहोस्, यो अलि बढी काम हो, तर तपाईले देख्नुहुनेछ कि स्मूदी कत्ति राम्रो हुन्छ, ओह, म स्ट्रबेरी शहरबाट हुँ, जुन लेपेको हो। । शुभकामना।
मटिग्री 72 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मटिग्रा 72! तपाईंको सुझाव विस्मयकारी छ ... म कन्डनडेड दुधको साथ कती स्वादिष्ट हुनेछ भनेर कल्पना गर्न पनि चाहन्न। म यसलाई अर्को पटक प्रयास गर्छु। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद !!
अनुरोध ८२ भन्यो
नमस्कार इरेन, यो नुस्खा एकदम राम्रो छ, मैले प्रशिक्षण पछि एक सानो प्रोटिन सीरम राखेर यो तयारी गरेको छु र यो स्वादिष्ट छ।
Requena82 लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद! म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु, मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो मन पर्छ। यो मेरो मनपर्ने को हिला एक हो 🙂
यो महान हो र बच्चाहरूलाई फल दिने राम्रो तरिका हो। व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद।
हामीलाई पछ्याउनु भएको र हामीलाई लेख्न को लागी तपाईलाई Soledad धन्यबाद! 🙂
म चिनी बिना स्ट्रबबेरी स्मूदी बनाउन सक्छु कि भनेर जान्न चाहान्छु?